Slideshare - အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏တိတ်ဆိတ်သောiantရာမ | Martech Zone
Slideshare - အကြောင်းအရာစျေးကွက်၏တိတ်ဆိတ်သောiantရာမ
တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 28, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ComScore အရ Slideshare ကနေငါးဆအသွားအလာရှိပါတယ် စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ LinkedIn၊ Facebook၊ Twitter နှင့် Youtube အပါအ ၀ င်အခြားလူကြိုက်များသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များထက်! Slideshare သည်ယခုအခါဝက်ဘ်ပေါ်ရှိထိပ်တန်းဆိုက် ၁၅၀ တွင်တစ်ခုဖြစ်သည် 60 သန်း တစ်လည့်သည်။ Slideshare တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုသူတို့၏ညှိနှိုင်းမှုနည်းစနစ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ၀ က်ဘ်ပေါ်၌ကြည့်ရှုနိုင်သည်3ဘီလီယံခန့်အမြင်များ တစ်လ!
Content marketing သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်ဖြစ်ပြီးဖောက်သည်များအားဆွဲဆောင်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အကြောင်းအရာကိုဖန်တီးခြင်းသို့မဟုတ်မျှဝေခြင်းပါ ၀ င်သည်။ ကုမ္ပဏီများသည်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့၏စျေးကွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဗျူဟာများတွင်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုထည့်သွင်းနေကြသည်။ အဆိုပါ Slideshare ကို infographic မှ။
ဖတ်ရှုဖို့သေချာပါစေ Slideshare ၏တန်ဖိုးကိုမည်သို့ချဲ့ထွင်ရမည်နည်း Slideshare မှရပ်ရွာမန်နေဂျာ Kit Seeborg မှဖြစ်သည်။